Kitra Analamanga : Mangataka an’i Tôta hametraka fialana ny K2HB | NewsMada
Kitra Analamanga : Mangataka an’i Tôta hametraka fialana ny K2HB
Taorian’ny famoahan’ny Vaomieram-pirenena momba ny fifidianana (Cen), ny lisitra ofisialin’ireo kandidà, hirotsaka ho filohan’ny ligin’ny baolina kitra, nilaza ary mitaky ny tokony hametrahan’ny filohan’ny ligin’Analamanga, Rakotoarimanana Henintsoa (Tôta), fialana, tsy hitantana intsony ny baolina kitra eto Analamanga, ny komity te hamerina ny hasin’ny baolina kitra malagasy (K2HB).
Nilaza, Randrianirina Jean Ignace (Ramasy), filohan’ity fikambanana ity fa tsy mendrika intsony ny hitondra ny ligy eto Analamanga intsony izy, izay efa namarina an-kady ny vokatra. Mbola noraisiny ho ohatra indray ny zava-nisy tamin’ity taom-pilalaovana ity, izay aotra, raha omena naoty. «Mampalahelo satria tsy nisy azon’Analamanga ny fifaninanam-pirenena tamin’ity. Ny ligin’Analamanga izay lehibe sy matanjaka indrindra eto Madagasikara, nefa aotra ny vokatra azony. Efa izao ve ny mahazo an’Analamanga dia mbola sahy hirotsaka hofidina ihany i Tôta? Manajà tena», hoy Ramasy.
Nitodika manokana tamin’ireo filohana seksiona efa nanambara mialoha fa mbola hanohana an’i Tôta, ny tenany. Nanaovany antso avo fa tsy mbola tara raha miova hevitra izy ireo. “Aza menatra ianareo, ary tsy mbola tara raha miova hevitra ka tsy handatsa-bato ho an’i Tôta, mba tsy hisian’ny nenina atsy ho atsy, fa sahia mijoro. Ndao isika hiaraka hanarina ny baolina kitra eto amin’ity Renivohitr’i Madagasikara ity”, araka ny nambaran-dRamasy, hatrany.
Nomarihin’ity filohan’ny K2HB ity, fa mifanohitra amin’ny lalàn’ny fanatanjahantena ary tsy fanao mihitsy na aiza na aiza, eran’izao tontolo izao, ny fanerena filohana seksiona, hanambara mialoha ny fifidianana fa hanohana, kandidà. Latsa-bato miafina mantsy ilay izy, fa tsy tsangan-tanana raha ny fanamarihany.